अादिवासीवादमा अाधारित तामाङ विधिशास्त्र
तामाङको आफ्नै परम्परागत न्यायप्रणाली छ ।
मिसेल फुकोका मत अनुसार भाषाको अध्ययन व्याकरण तथा शब्दावलीका नियमको विश्लेषणका निम्ति मात्रै नगरेर सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासहरुलाई केलाउनका निम्ति पनि गर्नुपर्छ । भाषाको सामाजिक अभ्यासको पक्षलाई फुकोले सङ्कथन अर्थात् डिस्कोर्स (Disscourse) भनेका छन् । उनको विचारमा सङ्कथनका तीनवटा पक्षहरू छन् : शक्ति, सत्य र चित्रण वा प्रतिनिधित्व (Representation) (सञ्जीव उप्रेती, सिद्धान्तका कुरा : दोस्रो, २०६८ साउन; काठमाडौं, पृ. ३७) ।
उल्लेखित कुरा (तथ्य)मा सकारात्मक अभिमत जाहेर गर्दै; लेख्छु कि- वास्तवमा भाषा अझै भनौं शब्दको अध्ययन भनेको त्यसको नियमको विश्लेषण मात्रैले पूर्ण हुँदैन । शब्दको सामाजिक तथा सांस्कृति पक्षको अध्ययन बिना शब्दमाथि कहिल्यै न्याय गर्नै सकिन्न । यहाँ सामाजिक सांस्कृति भन्नाले ऐतिहासिकता, वर्गीयता, क्षेत्रीयता, विषय वा विधागतता, धार्मिकता र नश्लीयता लगायत समाविष्ट भएका हुन्छन् ।
तामाङको आफ्नै परम्परागत न्यायप्रणाली छ । त्यसको मुख्य आधार भनेको आदिवासीवाद (Indigenism) हो । यसले हिन्दूविधिशास्त्रको विकल्प दिनेछ ।
यसप्रकार एउटै बस्तु पनि ठाउँ, परिवेश, समाज, संस्कार, विश्वास, मान्यता, दर्शन र विधा अनुसार फरक हुन्छन् । यो पक्षलाई बुझ्न नसकेसम्म अध्ययन अधूरै रहन्छ । उदाहरणको लागि अस्यङ, मामा र अङ्कललार्इ लिन सकिन्छ । भौतिक रुपमा निश्चित नाता पर्ने व्यक्ति मात्रै जस्तो देखिन्छ । जे भने पनि एउटै जस्तो लाग्न सक्छ । यद्यपि, यो भनेको अपूर्ण अध्ययन हो । साङ्केतिकताको क्रममा अपूर्णता पनि हो । यो भ्रमको मुख्य कारण अस्यङ, मामा र अङ्कल भनेको आमाको दाजुभाइ मात्रै हो भन्ने सतही बुझाई हो ।
सङ्कथन निर्माणको लागि यस्तो अध्ययनले काम गर्दैन । सङ्कथनको लागि त अस्यङ, मामा र अङ्कल शब्द (नाता)को सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय साथै नश्लीय अर्थ पहिल्याउन आवश्यक हुन्छ । यसप्रकार हेर्दा अस्यङ भन्नेले तिनका छोराछोरीसित विवाह गर्न सक्छन् । समाजले स्वीकृति दिएको हुन्छ । मामा भन्नेको समाज नै अर्कै हो । त्यसैले नश्लीयता, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष, ऐतिहासिकता साथै विश्वास पद्धति नै फरक छ ।
नेपाली परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी बाहेकका अन्यले तर्सनु वा झर्कनु पर्दैन । सबैको समान हैसियत र अधिकारको सुनिश्चितता नै आदिवासीवादमा आधारित आदिवासी विधिशास्त्र (तामाङ विधिशास्त्र) हो ।
यही तथ्यलाई बुझ्न नसक्ने वा स्वीकार गर्दा केही अप्ठेरो पर्ला वा आउला कि भन्ने डर लिने हो अध्ययन पूर्ण हुँदैन । अपूर्ण अध्ययनले सङ्कथन बन्दैन । सङ्कथन निर्माण गर्न नसक्नेले वास्तविकता (सत्य)लाई चिन्न सक्तैन । तथ्य (विषय)लाई चित्रण वा प्रदर्शन वा प्रतिनिधित्व गराउन सक्तैन । प्रतिनिधित्व वा चित्रण गर्न नसकेपछि सत्य चिन्न र स्थापित गराउन सक्ने कुरै हुँदैन । सत्य विहीन अवस्थामा शक्ति आउँदैन । शक्ति बिना कुनै पनि समाज स्वतन्त्र हुने कल्पना गर्नै सकिन्न ।
यसरी प्रस्तुत् हुनुको कारण नलुकाई भन्नुपर्दा- म्हेनिङ र दशैँ एउटै होइन । अहिले पनि तामाङ समाजमा दशैँ र म्हेनिङ एउटै भन्ने गलत बुझाई पूर्णतः हटिसकेको छैन । जुन दिन पूर्णतः फरक रहेछन् भन्ने तथ्य बुझ्नेछौं; त्यो दिन एउटा सत्य (म्हेनिङ) स्थापित हुनेछ । तामाङ भनेको को हो र को होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । त्यसैका लागि म्हेनिङ पुस्तकले वास्तविकतालाई चित्रण र प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास मात्रै गरेको छ । यसप्रकार म्हेनिङलाई स्थापित गराएपछि बल्ल तामाङले गज्जब शक्ति प्राप्त गर्नेछ ।
करीब साढे दुर्इ शताब्दीदेखि पढाउँदै, झुक्याउँदै र स्थापित गराउँदै ल्याएको झूठको पर्दा च्यातिनेछ । यहाँनेर त्यो झूठ भनेको सम्पूर्ण नेपालीको महान् पर्व विजयादशमी/बडादशैँ हो । अब त्यो महान् पर्वको आधारहरू स्पष्ट हुनेछन् । महान् देखिएको विजयादशमीको घुम्टो उघारिनेछ । त्यसभित्र तामाङको म्हेनिङ, मगरको डस्याक्के, थारुको सखिया र नेवारको मोःनी देखिनेछन् । तिनै तामाङ, मगर, थारु र नेवारको मौलिक पर्वलार्इ माथिबाट विजयादशमीको खोल ओडाएका भन्ने छर्लङ्ग हुनेछ ।
अन्ततः महान् पर्व बडादशैँबाट तामाङ, मगर, थारु र नेवारले आ-आफ्नो भाग फिर्ता लिएपछि बडादशैँ हिन्दूको मात्रै हुनेछ । यसपछि बडादशैँको हविगत के होला या नहोला ? तपाईँ आफैँ सोच्नोस् ! बडादशैँ कमजोर भएपछि ल्होछारले अर्को धम्माकेदार प्रहार गर्ने शक्ति प्राप्त गर्नेछ । वास्तवमा ल्होछारलाई समाप्त पार्न ल्याएको माघेसङ्क्रान्ति आक्रमणकारी शक्तिविहीन हुनेछ । चैतेदशैँ (रामनवमी)को विकल्प तामाङको सेरकेमले दिनेछ । दुगुङ्ह्यमा बुद्धत्वको चर्चा परिचर्चा व्यापक हुनेछ । जनै पूर्णिमालाई तामाङको गोनेङ्ह्यले टक्कर दिनेछ । अरू पर्वहरु भनेका त राज्यसत्ताले स्थापित गर्दै आएको हैकमवादका विरुद्ध प्रहार गर्नेक्रममा खर्च गर्नु नपरेको थप चाड हुनेछन् ।
यतिखेर एउटा अर्को तथ्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन । तामाङको आफ्नै परम्परागत न्यायप्रणाली छ । त्यसको मुख्य आधार भनेको आदिवासीवाद (Indigenism) हो । यसले हिन्दूविधिशास्त्रको विकल्प दिनेछ । यद्यपि, आदिवासीवाद भनेको आदिवासी भनिएका वा त्यो नश्लका लागि मात्रै कुरा गर्ने चिज होइन । यसको हृदय विशाल छ । यसले त सबै मानिसलाई बराबर ठान्छ । जातपातको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले ऊँच र नीच छैन ।
जानअञ्जानमा प्राणी हत्या हुन्छन् । त्यसरी मारिएका प्राणीको उद्धार पनि अपरिहार्य मानिएको छ । हरेक प्राणीका पनि मानिसकै बराबर अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । वनस्पतिको उपभोग बिना कल्पना गर्न नसकिने दैनिकी छ । तैपनि दुगुङ्ह्यको तीनदेखि सात दिनसम्म वनस्पतिको हत्या गर्न दिँदैन । घाँस काट्ने र झार उखेल्ने अधिकार समेत मानिसबाट फिर्ता लिन्छ । ढुङ्गा, माटो, खोला, पहाड, हिमाल रुखपात, कीराफट्याङ्ग्रा साथै प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत साधनको समेत अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने एक मात्रै विधिशास्त्र भनेको आदिवासीवाद वा आदिवासी विधिशास्त्र हो । त्यसको ऐतिहासिकता स्पष्ट रहेको छ । हालसम्म पनि प्रचलनमा भेटिएका छन् ।
हो; यही नै आदिवासीवाद हो । त्यसैले नेपाली परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी बाहेकका अन्यले तर्सनु वा झर्कनु पर्दैन । सबैको समान हैसियत र अधिकारको सुनिश्चितता नै आदिवासीवादमा आधारित आदिवासी विधिशास्त्र (तामाङ विधिशास्त्र) हो । कुनै पनि समुदायलाई शोषण र दमन हैन सद्भाव र समभाव स्थापना गर्नु तामाङ विधिशास्त्रको मुख्य उद्धेश्य हो । त्यसैले कोही फुर्कन वा डराउनु पर्दैन भन्ने अनुरोधका साथ विदा हुन्छु । धन्यवाद !!!